အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးကူညီရန် နည်းပညာဖြန့်ဝေပေးမှုအတွက် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရ - Xinhua News Agency
အဒစ်အဘာဘာ၊ မေ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် BGI Health Ethiopia သည် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာများနှင့် အသိပညာဖြန့်ဝေပေးမှုများဖြင့် စွမ်းစွမ်းတမံအားထုတ်ခဲ့သောကြောင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရသည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ ပင်မဝင်ပေါက်နှင့် အာဖရိကတိုက်၏ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနှင့် ဦးဆောင် ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သော Addis Ababa Bole နိုင်ငံတကာလေဆိပ် ဥပစာတွင် ရှိသည့် ဟို့ယန် လေပူဖောင်းဓါတ်ခွဲခန်း၌ BGI Health Ethiopia မှ စီမံ လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
ဟို့ယန်လေပူဖောင်းဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ဒေသခံညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Eyuel Fikru က ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် COVID-19 စစ်ဆေးမှုတွင် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့် ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားပြီး ဒေသတွင်းကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့်အတူ ခေတ်မီသည့် COVID-19 စစ်ဆေးရေးနည်းပညာများကို မျှဝေခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Eyuel Fikru က
ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှုမှာသုံးနေတဲ့ ကိရိယာတွေနဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေဟာ တကယ့်ကိုမှ အသစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ တမူထူးခြားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ဗဟုသုတကောင်းတွေရရှိပြီးတော့ အဲဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီတော့ ဒါဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရာမှာ နောက်ပြီး ဗဟုသုတမျှဝေရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် နေ့စဉ်လူပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော်ကို COVID-19 ရှိမရှိ လျှင်မြန်စွာစစ်ဆေးမှုနှင့် ရောဂါရှာဖွေ စစ်ဆေးရေးနည်းပညာများဖြင့် စစ်ဆေးပေးပြီး ခရီးသည်များက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ မသွားရောက်မီ အချိန် ၃ နာရီခန့်ကြိုတင်ကာ ရလဒ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
BGI Health Ethiopia မှ PLC အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ Saron Tamirat က ဓါတ်ခွဲခန်း ၌စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှု ၏ မှန်ကန်တိကျမှု ကို ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါဓါတ်ခွဲခန်းသည် အီသီယိုးပီးယား လေကြောင်းလိုင်းများ၌ ကူးစက်မှု ကင်းစင်ရေး လေကြောင်းများဖြစ်စေရန်နှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကို COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး၌ ကြီးမားသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေကြောင်း Fikru က ဆိုသည်။
BGI Health Ethiopia မှ PLC အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ Saron Tamirat က
“ ဒီဓါတ်ခွဲခန်းဟာ အထူးသဖြင့် BGI Health Ethiopia PLC က COVID-19 ထိန်းချုပ်မှုမှာ ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ဟာ စမ်းသပ်ရေးကိရိယာတွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး အဲဒါတွေကို ဒီကိုယူဆောင်လာပြီး စစ်ဆေးမှုမှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကြောင့်ရလဒ်တွေဟာသိပ်ကိုတိကျပြီး မှန်ကန်ပါတယ်”ဟုဆိုသည်။
BGI Health Ethiopia သည် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရောဂါစမ်းသပ်ရေး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ခုကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ၎င်းမှာ နှစ်စဉ် SARS-COV-2 RT PCR စမ်းသပ်ရေးကိရိယာပေါင်း ၆ သန်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အဆိုပါ စမ်းသပ်ရေးကိရိယာများအား အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ နှင့် အခြား အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံများတွင် ပဋိပစ္စည်းစမ်းသပ်ရေးကိရိယာများအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် လေဆိပ်များနှင့် ပြည်တွင်းဝင်ခွင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Chinese company wins acclaim for technology transfer to aid Ethiopia’s COVID-19 fight
ADDIS ABABA, May 19 (Xinhua) —
BGI Health Ethiopia,asubsidiary of China’s biotech company, has won acclaim for its technology and knowledge transfer endeavors to propel Ethiopia’s fight against the COVID-19 pandemic.
The BGI Health Ethiopia administers Huo-Yan Air Lab inside the premises of Addis Ababa Bole International Airport, Ethiopia’s main international hub and Africa’s busiest and leading gateway.
Eyuel Fikru, one of the Ethiopian health experts working as local team coordinator at the Huo-Yan Air Lab, said the company has introduced the latest technologies and equipment to conduct COVID-19 testing and has shared good knowledge on modern COVID-19 testing technology with local health professionals.
SOUNDBITE 1 (English): EYUEL FIKRU, Ethiopian health expert
“The equipment and the steps that we are following to do the tests are really new and different. So our local teams, they are having good knowledge and the know-how to learn about these things. So, it is somehowagood way of capacity building and transfer of knowledge.”
The laboratory conducts up to 1,000 COVID-19 tests per day usingarapid detection and diagnosis technology and notifies results three hours before passengers get on board to travel to China and other parts of the world.
According to Fikru, the laboratory playsasignificant role for Ethiopian airlines to conduct infection-free flights and help the East African nation fight the COVID-19 pandemic.
BGI Health Ethiopia PLC Administration Director Saron Tamirat also lauded the accuracy of the testing services of the lab.
SOUNDBITE2(English): SARON TAMIRAT, BGI Health Ethiopia PLC Administration Director
“This laboratory has playedabig role in COVID-19 management as well as BGI Health Ethiopia PLC in general. We produce test kits and then bring them here to provide testing services which happen to be very accurate and very precise.”
BGI Health Ethiopia also opened the first Chinese reagent factory in Ethiopia in September 2020, which hasaproduction capacity of6million SARS-COV-2 RT PCR detection kits per year. The testing kits are widely used in Ethiopia and in other African countries for antigen rapid tests, particularly at airports and land entry checkpoints.